Ithegi: ukuvavanya oko | Martech Zone
Ithegi: ukuvavanya oko
Ukubeka iliso kwi-SEO engabizi kakhulu
NgoMvulo, Juni 4, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Sijonge uSERPS.com okwethutyana ngoku. UMseki uScott Krager usibonisile iinguqulelo zokuqala kwaye sachukumiseka ngokwenene. Sisebenzise isabelo sethu izixhobo zokubeka esweni i-SEO ngaphambili. Nangona kunjalo, i-SEO iyaqhubeka nokutshintsha… kwaye izixhobo ezininzi azigcinwanga. Iqela likaScott lilwamkele olu tshintsho kwaye ngenene luza nenkqubo eyahluke mpela… ngesakhono sokudibanisa ngokuthe ngqo kuGoogle Analytics, ukubeka iliso kwizalathi zentlalo, ukulinganisa iimeko zovavanyo